Apple TV: Maitiro ekukurumidza kuchinjika pakati pezvakasiyana maapps | IPhone nhau
Apple TV: Maitiro ekukurumidza kuchinjika pakati pemapurogiramu akasiyana
Cristina Torres chinobata mufananidzo | | Zvidzidzo uye zvinyorwa
Kunyangwe zvingaite kunge zviripo zvinhu zvishoma zvachinja neiyo itsva Apple TV (Yechina chizvarwa), chokwadi ndechekuti shanduko yayo inoonekwa mukushandiswa kwemazuva ese. Kwete chete nekuda kwekuisirwa kwaSiri, kana nekuda kweiyo yakanakisa processor, asi zvakare nekuda kwekukurumidza mabasa senge atinotsanangurira kwauri nhasi izvo zvinoita kuti zvinyanye kunakidza kumushandisi. Mupfungwa iyoyo, tinoda kukuudza maitiro aunogona kushandura zviri nyore pakati pezvishandiso pasina kuenda kumenyu huru kana uine zvekupedzisira zvemidziyo yeterevhizheni yeApple.
Kubva kuna Apple TV kure kudzora iwe waizodzokera kumenyu kuti ukwanise kuchinja pakati pemapurogiramu aunoda kushandisa. Nekubatana naSiri, zvichave zvakakwana kuti uite imwechete pamwe chete kubaya pabhatani reKumba kuti uwane iyo switch switch. Paunenge uchinge uri mukati maro, unogona kushandisa bata rekubata remuchina wako kushandura pakati peanowanikwa uye kuita mashandisiro awo nekukurumidza nekukurumidza sezvaunenge uchida. Ichokwadi kuti hachisi shanduko inonyanya kushamisa kuti isunungurwe senhau, asi maererano nekushandiswa kwemazuva ese, zvinobatsira vashandisi vazhinji kuwana zvakawanda kubva muchigadzirwa chavo.
Apple yave ichizivikanwa nekugadzira zvinhu zvezuva nezuva zviri nyore, uye ichi ndicho chikamu chekubudirira kwayo. Zano ravanotiita isu mu chizvarwa chitsva Apple TV Inoenderera nemutsara mumwe chete nekubheja pamushandisi uye nekunyaradzwa kwavo kupfuura hukuru hwakawanda uhwo husingagare huchitibatsira Saka kana iwe uchiri kukahadzika nezvekutenga ichi chishandiso cheTV chakasainwa neapuro sechipo cheKisimusi, pamwe basa ratakatsanangura kwauri nhasi ndechimwezve chikonzero chekuchiwana. Kana iwe uri mumwe wevaya vanofunga kuti kuSpain haugone kuwana zvakazara mairi?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Apple TV: Maitiro ekukurumidza kuchinjika pakati pemapurogiramu akasiyana
Chaizvoizvo ?? Zvinotora "chinyorwa" kutaura kuti nekaviri menyu menyu chishandiso chinoshanduka ... zvakakomba?
Nenzira, kuti shanduko yeApple TV hainyatso kuoneka, idambe here? Icho ndicho chigadzirwa icho chakave nekushanduka kwakanyanya kweayo ese apple catalog nekure.
Nenzira, haisi nebhatani remurume, iri neiya kurudyi kwayo, iyo ine mufananidzo weTV.
Ini ndinotora mukana uno kuona kana paine munhu angandibatsira, kuti handikwanise kushandisa Remote app kana kushandisa airplay asi izvi chete neiyo iPhone sezvo macbook ichiita Airplay, ini ndine Apple TV yakabatana neEthernet, uye hapana kana iyo iPhone Remote app kana Airplay d iPhone inoshanda, ndinodambura Ethernet ndoisiya paWifi uye ZVESE zvinoshanda! Ndokumbirawo kuti ndide kusiya kusahadzika kana ndichifanira kusungirwa kuve nayo neWifi uye kwete neEthernet! Graciiiasss
European Commission inoongorora mutero weApple muIreland
Tandem, imwe nzira yekudzidzira mitauro